ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရက ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဒီနေ့ကစပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ၇က်‌နေ့အထိ ပိတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
- တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု - NLD အမတ်တွေ ကိုယ်တိုင်လွှတ်တော်ခေါ် click
- အာဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံဘဲ အန်အယ်လ်ဒီကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် စတင်ခေါ်ယူ click
- “ပြည်သူ့ mandate ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ချေဖျက်မရနိုင်”- NLD စီအီးစီ ဦးအောင်ကြည်ညွန့် click
- အာဏာသိမ်းအစိုးရက အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး click
- မန္တလေးတွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲမှ ၃ ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံရ click
- အ ာဏာရှင်အလိုမရှိကြောင်း စာရေးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ခဲ့သည့် ကြံခင်းရဲတပ်သား ၂ ဦး အဖမ်းခံရ click
- စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook အသုံးပြုမှု ယာယီပိတ်ပင်တော့မည် click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့် click
- အာဏာသိမ်းမှု လက်မခံကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ လှုပ်ရှားမှုစတင် click
- စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ သံပုံးတီးလှုပ်ရှားမှု ဆက်လုပ်မည် click
- ဝါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာစစ်သံရုံးရှေ့မှာ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေဆန္ဒပြ click
- သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကို စစ်အစိုးရတရားစွဲမှုအပေါ် အမြင်များ click
- စစ်အာဏာသိမ်းမှု မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချ click
- စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဂျပန်၊ အမေရိကန်နဲ့ ထိုင်းမှာ ဆန္ဒပြ click
- သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကို တရားစွဲခွင့်မရှိဘူးလို့ ရှေ့နေတွေပြော click
- သမ္မတနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲတာ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုလို့ ကရင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြော click
- ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတိုင်း လွှတ်တော်ခေါ်ဖို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တောင်းဆို click
- တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ကန့်ကွက် click
- တပ်ကဖမ်းသွားတဲ့ မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီး သုံးဦး ပျောက်ဆုံးနေ click
- စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်တချို့ နုတ်ထွက်မှုတွေရှိလာ click
- SNLD ပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းညွန့်လွင်ကို ပါတီဥက္ကဋ္ဌသစ်အဖြစ် ရွေးချယ် click
- ငါးထောင်တန်၊ တစ်သောင်းတန်တွေ ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတာ ကောလာဟလလို့ ဗဟိုဘဏ်ကြေညာ click
There is very Well content. This post is very informative According to this topic. I hope Author shall be sharing more information about this topic. My blog is all about that Best_Hair_Patch_In_Delhi & Hair_Fall_Treatment. To Book Your Service 📞+91-9873152223, +91-9250504810 and be our Happy Client Click Here for Contact us at Whatsapp no: https://wa.me/919873152223. Address - Vardhman Diamond Plaza, First Floor D.B. Gupta Road Pahar Ganj New Delhi – 110055.